"မြန်မာ တို့ အတွက် ဗဟုသုတ" : Hacker တိုင်း လူလိမ် မဟုပ်ပါဘူး
Hacker တိုင်း လူလိမ် မဟုပ်ပါဘူး
Hacker ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ အောက်ပါအချက် သုံးချက်ကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားဘို့လိုပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုမှာ ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေက အသေးစိတ်နားလည်အောင်ခြပြပေးထားပါတယ်။
ပထမ အဆင့် Basic Hacking Skills တွေကို မဖြစ်မနေလေ့လာရပါမည်။ အောက်ပါခေါင်းစဉ်ခွဲ သုံးခုရှိပါတယ်။
1: Unix is the operating system of the Internet ဆိုတဲ့ Unix ကိုမဖြစ်မနေသိဘို့ လိုပါတယ်။
2: If you don't know how to program, learning basic HyperText Mark-Up Language (HTML) and gradually building proficiency is essential. ဒိစာကြောင်းကို ဖတ်ခြင်းအားဖြင့် HTML ကို မဖြစ်မနေ ရေးတပ်ဖို့လိုပါတယ်။
3: Learn the language of programing. ကွန်ပျူတာ ဘာသာစကားများ ဖြင်သော Java, C++, Python စသဖြင့် Program တွေကို ရေးတပ်ရပါမယ်။
ဒုတိယ အဆင့်မှာ Hacker တစ်ယောက်လို တွေးခေါ်တပ်ရမယ်။ ခေါင်းစဉ်ခွဲ လေးခုရှိပါတယ်။
1: Think creatively. ဖန်တည်းနိုင်စွမ်း ရှိရှိ (သို့) အဆင့်မြင့်မြင့် တွေးခေါ်တပ်ရမည်။
2: Love solving problems. ပြဿနာ များကိုဖြေရှင်းရန် ဇွဲလုံလရှိရှိ နဲ့ ဝါသနာပြင်းပြရမည်။
3: Learn to recognize and fight authority. အခွင့်အာဏာ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို တိုက်ခိုက်ဖို့ အရာရာကို လေ့လာ မှတ်သားတပ်ရမယ်။
4: Be competent. မိမိ အရည်ချင်းကောင်းအောင် ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။
တတိယ အဆင့်မှာ Earning Respect ထိုက်တန်တဲ့ အထောက်ကူပြုမှုတွေ ရှိရမယ်။ သူ့အောက်မှာ ခေါင်းစဉ်ငယ် ငါးခုရှိတယ်။
1: Write open-source software.
2: Help test and debug open-source software.
3: Publish useful information.
4: Help keep the infrastructure working.
5: Serve the hacker culture itself.
အထက်ပါ အရည်ချင်းများ ရှိမှသာ Hacker ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါသည် အောက်ပါ Post လေးကိုကြိုက်နှင့်သက်လို့ ရွှေမြို့တော် မှ ကူးယူ ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Hacker တိုင်းဟာ လူလိမ် လူညာများ သခိုး များ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ပညာမြောက်များစွာ တပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အထက်ပါ ရေးသားချက်များကို အကြယ် ရှင်းပြပါအုန်းမည်။ G-mail တို့ Facebook ကိုဖေါက်တယ် ဆိုတာ လူတိုင်း လုပ်နိုင်လောက်အောင် မလွယ်ပါဘူး။ ခုလူပြောများနေတာ တွေက Hacking နည်းပညာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ Hacking နည်းပညာကို မပြောနဲ့ Cracking အဆင့်တောင် မရောက်သေးပါဘူး။ တစ်လ အစမ်းပေး သုံးတဲ့ Software ကို တစ်သက်လုံးသုံးလို့ရအောင် လုပ်နိုင်တာ ဟာ Cracking အဆင့်လောက်သာ ရှိပါသေးတယ်။ ဒီအဆင့်လောက် ကို Hacker တွေမလုပ်ပါဘူး။ Mercedes ကားတစ်စီးရဲ့ နံပါတ်ပြားကို မြင်ရုံနဲ့ အဲဒီ Mercedes မူရင်း Company ကကွန်ပျူတာတွေထဲကို ဝင်ပြိး Geer Box Code ကိုရအောင်ယူပြီး Geer Box ကို Lock ကျအောင်လုပ်နိုင်တာ မျိူး ကမှ Hacker ပါ။ Program လေးတခုလောက်မှ ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်တပ်မထားရင် Hacker ဖြစ်ဖို့ မပြောနဲ့ Cracker တောင်ဖြစ်ဖို့ခက်ပါတယ်။ Hacker ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ဆရာဝန် ဖြစ်ဖို့ထက် ပိုခက်တာကိုတောင် မှ မသိဘဲ Hacker ဆိုတာ လူလိမ်တွေ လို့ မပြောသင့်ပါဘူး။
ဟက်ကာ လူလိမ် GMail ကောလဟာလ များ google ကိုစော်ကားတာလား
ကျွန်တေ်ာအလုပ်ရှုပ်နေတယ် အသက် က ၂၂ပါကွန်ပျူတာလောကကိုရောက်တာလာ ၁နှစ်ခွဲရှိပီ…ဘယ်သူတွေက ttmgmailteam@gmail.com နဲ့ no-reply@gmail.com တို့ဟာမေးလ်ဖွင့်ရုံနဲ့ ပတ်စဝေါ့ရတယ် ဟုတ်လား gmail account password တွေကိုကာကွယ်နည်း (၇)မျိုးကို ခင်ဗျားတို့သိရဲ့လား… အားနည်းချက် (၇)ချက်ရှိတယ်ဆိုတာကောသိရဲ့လား ဟက်ကာတစ်ယောက်ဆိုပါဆို့…သူဘာလို့အဖမ်းခံရတာလဲ.. သိလား သူကသူများတွေကိုတော့ဟတ်တတ်ပီးမိမိရဲ့ အန္တရယ်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတာမသိလို့ပဲ… ဘယ်အရာမဆိုအားနည်းချက်အားသာချက်ရှိတယ်…ဥပမာ window XP အမျိုးစားသုံးတယ်လူဆိုပါဆို့ကွန်ပျူတာဖွင့်ဖွင့်ချင်း window xp လိုဂိုကိုဖျောက်မယ် ဆိုပါဆို့…
My computer ကို right click နှိပ် properties ကိုနှိပ် advance ကိုနှိပ် start up and recovery ခေါင်းစဉ်ရဲ့ settingကိုနှိပ် edit ဆိုတဲ့စာကိုမြင်မယ် အဲဒါကိုဆက်နှိပ် notepad စာလေးပေါ်လာမယ်ပြီးရင် ဘိတ်ဆုံးစာကျောင်းမှာ စပေ့ဘားလေးခြားပီး /noguiboot ၇ိုက်ပီးfile ကိုsave လုပ် restart ချလိုက်ရင်ဗျာ window xp /window7တွေကိုဝင်ထိုးတတ်ခါစမှာမတွေ့ရဘူး…ချက်တင်ကနေရှယ်ယာလုပ်တဲ့စာသားကိုဖတ်မိလိုက်တဲ့အခါမှာတွေကတာကို့ပြောတာပါ…ဘယ်သူတွေအသံလွင့်လိုက်တာလဲ…အသုံးမကျဘူလို့ထင်တယ်..အဲလိုလူတွေများလာရင်အင်တာနက်ကိုဖြတ်စီးနိုင်တယ်.. ညီနေမင်းဝက်ဆိုဒ်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး.
ညီနေမင်းဝက်ဆိုဒ်မှာ လည်းမေးလ်ဖွင့်တာနဲ့ပတ်စဝေါ့ရတယ်တဲ့…အဲလိုရေးထားတယ်..မယုံဘူး စမ်းရဲရင်ကျနော့်အကောက်ကိုစမ်းကြည့်လေ… ပြောတာတွေပဲနားမထောင်နဲ့အုံး… ၀က်ဆိုဒ်သဘောကော
သူခိုးလို့ခေါ်တယ်..နောက်တစ်မျိုးအရဆို၇င်လူလိမ်လို့ခေါ်တယ်…လိမ်ပီးပြောရတဲ့အလုပ်တွေပဲ အဲဒါသိပီလား…Kelogger ဆို၇င်လည်းထားပါတော့ဗျာကြားကောင်းပါရဲ့အဲလိုပေါက်ကရတွေပြောခြင်းဟာ google အကောက်တွေကို ဖရီးပေးနေတဲ့ ဂူးဂဲလ်ရဲ့သိတ်ခါကိုငဲ့ပါဦးဗျာ..google security ကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲသိလား security ဟာ gmail account ကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ် gmailက ဖြူတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတာက ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Hackerတွေတိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့လိမ်လာလို့… secondary email နဲ့ question တွေမရတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲ ပတ်စဝေါ့ခိုးခံရရင်စလုပ်တဲ့ရက်စွဲတွေအချိန်တွေမေးတဲ့ပတ်စဝေ့ါရနည်းပဲထားတော့တယ်..ဒါပေမယ့်… နောက်တစ်ခုက 2011မေလ မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တယ် password recover စနစ်တစ်ခုအရမ်းကောင်းပါတယ်… ခိုးခံရလည်းအေးဆေးနေလို့ရတယ်…ကြိုက်သလောက်ဟတ်ကာတွေလုပ်
ပါစေသိတယ် အဲဟက်ကာနည်းကို 2007ဟက်ပေးမယ်ဆိုပီး ငွေညစ်လာတဲ့ကိတ်စတွေ၇ှီပါတယ် သွားမပေးလိုက်ပါနဲ့အလိမ်ညာတွေများပါတယ်…အကောက်ကိုအပေါင်ပေးပီးဟတ်ခိုင်းရတဲ့အလုပ်တွေ ကုတ်တွေကိုအတုတွေလုပ်ပီး ဟတ်လို့ရတယ်ဆိုပီး အလိမ်ဇာတ်လမ်းတွေပေါ်လာတယ်…နီုင်ငံခြားဝက်ဆိုဒ်တွေမှာရေးသားခဲ့တယ်.. အဲနည်းပညာကို 2004 ခုနှစ်မှာ ကိုသက်နိုင်အောင်နိုင်ငံခြားဝက်ဆိုက်မှာတင်ပြခဲ့တယ်2003ခုနှစ်လောက်မှာ ဂျာမနီလူတစ်ယောက်က ပညာတွေနဲ့ဟက်နည်းပညာကိုထွင်ခဲ့တယ်…server ကိုတော့လျစ်လှူရုပြီး ဆရာစားချန်ခဲ့တယ်… အဲအချိန်မှာ ကိုသက်နီုင်အောင်မြန်မာလို့ထင်တာပဲနော်သူကလည်း 2004မှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်.. ဒါပေမယ့်
Server ကိုနားမလည်ခဲ့ဘူး…2003 ရလဒ်ကိုပဲတင်ပြခဲ့တယ်…အဲတော့ဟက်တာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး…2009မှာလည်းလူတစ်ယောက်က 2004တုန်းကလိုပဲကော်ပီရိုက်ပြတယ် ဆရာစားအ၇မ်းချန်တယ်…သဘောတရားက -၂၀၁၁မှာမေးတွေအားလုံးကိုဟတ်တဲ့အရာတွေခောတ်စားပါတယ်…ဒါပေမယ့်… ငွေငွေငွေ သီချင်းလိုပါဘဲ…
ဆာဗာ(၁)မှာ ပတ်စဝေါ့ ဟက်လိုတဲ့လူက ပရိုဂရမ်းဖိုင်တွေကိုသိမ်းတယ်…
ပတ်စဝေါ့သိလိုသူက ဆာဗာ(၁)မှာ ဖိုင်တွေကိုတင်လိုက်ပါတယ်..အဲဆာဗာမှာပတ်စဝေါ့အလုံးလုံးလေးဂဏန်းတွေကို
၇န်ကုန်ကလူက ကဆာဗာ၁မှာသူရေးထားတဲ့ဖိုင်ကို မန်းလေးကိုပို့လိုက်တယ် မန်းလေးကလူကမသိပဲ
ပတ်စဝေါ့သိလိုသူကချက်ချင်းဖောက်ကြည့်ရုံပဲi love you ဆို၇င် I love you ပေါ့ဗျာ မြန်မာချက်တင်ကဖွန်များတယ်မလား…
နောက်တစ်ခုဆိုတာကကိုယ်ကိုကိုယ်သိတ်တတ်လှပီလို့မထင်ပါနဲ့အဲလိုအရမ်းတတ်အရမ်းတော်တဲ့လူတွေကဟက်ကာလက်ချက်စာမိပါလိမ့်မယ်..ဟက်ကာဆိုတာညဏ်ကောင်းပီးတွေးခေါ်တတ်သဘောတရားကိုနားလည်တဲ့လူတွေမှသာလျှင်ဖြစ်တာပါ…သတင်းဖတ်လိုက်မိတယ် အသက် ၁၉နှစ်အရွယ်တစ်ဦးCIA ကိုဟက်ကာသွားကျတယ်လေ သူများဟာတော့လိုချင်တယ်… စီအိုင်အေကဟတ်မှန်းသိရော စွဲစိပါလေရော…
ငါစားမြင်ပီးငှါမျှားချိတ်မမြင်ဘူလေး…ဟက်ကာစာအုပ်ပေါင်း အအုပ် ၃၀ ၀က်ဆိုဒ်အကျောင်း နဲ့ဗိုင်းရပ်ဘာသာကိုတတ်ကျွမ်းမယ်ဆိုရင်ဟက်ကာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါပီ…
Posted by Than Minn Naing at 6:22 PM